Ụlọ ekupụ Electric Fan okpomọkụ iru mmiri Control, Kool Max Electric Easy Wind, ST-PQD / dd-400 - China Beijing Fenglong griin haus
n'elu ụlọ ekupụ Electric Fan okpomọkụ iru mmiri Control, Kool Max Electric Easy Wind, ST-PQD / dd-400
Ngwa ngwa jụrụ, Patent Product, Magburu onwe dehumidification ma na-amanye ventilashion arụmọrụ, Rain ehi ehi na-àmà imewe, Anti-aka nká, anọte Aka iji ndụ, adaba echichi, Firm na a pụrụ ịdabere, Low oriri ike, 3 afọ quality akwụkwọ ikike
Gịnị bụ Kool Max Easy Wind?
The Kool Max® Easy Wind bụ a n'elu ụlọ n'ịnyịnya mmịpụta ekupụ akwado, kpọmkwem haziri maka Greenhouses na Plastic cover. Ọ bụ ụzọ dị mfe na oru oma ụzọ growers nweta irè okpomọkụ & iru mmiri akara, belata ọrịa nke osisi, na-griin haus ọhụrụ. Mere si inogide ihe na 3 afọ akwụkwọ ikike.
The iru mmiri na-ekpo ọkụ ikuku na-emekarị bụ na n'elu ụlọ nke griin haus. Ọ bụ ike wepu ha griin haus na ugbu a ekupụ ụzọ, n'ihi ya, nwere ike ime ka ibu nke bacteria na germs, na-ewetara ọrịa osisi. The Easy ifufe ofufe nwere ike dozie nsogbu a nke ọma.
1) The ofufe arụnyere na n'elu ụlọ nke si na greenhouse. Na electric nlereanya, ọ nwere ike na-ekpo ọkụ ikuku nke si griin haus na belata okpomọkụ n'ime.
2.) Ọ pụrụ uzuoku si na belata iru mmiri na griin haus. The ikuku eruba maka electric nlereanya bụ 4600m3 / h, n'ihi ya, ọ pụrụ ibelata iru mmiri ngwa ngwa. The nkezi iru mmiri ike belata banyere 15%.
3) O nwere ike na-akwalite ikuku eruba n'ime na gas mgbanwe nke osisi obodo, ghara imegide gburugburu ebe obibi ihe, ma belata ọrịa nke osisi.
4) ezitekwara CO2 na griin haus, na-na ọ dị mkpa CO2 ịta, na uru ya na uto nke osisi.
The ihe onwunwe nke onye ofufe yiri ihe nkiri, ya mere ọ dịghị chemical mmeghachi omume na na aka ebe n'etiti ofufe na film. N'ihi na otu kwes mgbasa, na onye ofufe agaghị ihihi mmiri ozuzo. (mgbe onye ofufe arụnyere na PC griin haus na glasshouse, o nwere ike jiri akàrà iko mama). Mgbe mmeghe na onye ofufe, okpu a ga-emeghe nke ifufe na-ventilashion, mgbe onye ofufe a na-emechi, okpu ga dobe na-akpaghị aka ruru ka ike ndọda (ike-eji n'ime 45 ogo nke kwụ n'akuku). Okpu kpuchie tightly na gbọmgbọm mgbe onye ofufe a na-emechi. Ọ pụrụ igbochi okpomọkụ ọnwụ, gbochie ikuku, mmiri ozuzo, na snow n'èzí ịbanye griin haus na-ekwe nkwa na akara na nchekwa.
Anti-aka nká, anọte Aka
The ihe onwunwe dị ọcha Pee ihe onwunwe, na-agbakwunye mgbochi ịka nká gị n'ụlọnga, melite mgbochi merela agadi mmetụta.
Onye ofufe na-eji ìhè plastic akụkụ, kọmpat Ọdịdị, obere olu, na ìhè arọ. Otu ndị mmadụ nwere ike iwunye na onye ofufe ole na ole ngwaọrụ, ọ na-azọpụta oge na oru. N'oge echichi, naanị nkechi na-akwado ha ntị na support tube, mgbe idozi mwekota na ntị tube. Ọ dị mfe ma dị mma.
Ọ nwere ike na-eji maka ventilashion nke ọwara, multi-adịru griin haus, anyanwụ griin haus, glasshouse, ecologic Restaurant, na okuko.
3 Afọ Nkwa na
Quality-obi ike, si ịzụta ụbọchị, n'ime akwụkwọ ikike oge, FLC ga-eme zuru chefuo ma ọ bụ dochie ha niile maka mfịna ngwaahịa.
Previous: Griin haus jụrụ na Circulation Fan ventilashion Product ZLFJ400 / 500, igwe anaghị agba nchara
Next: Ụlọ ekupụ Manual Fan okpomọkụ iru mmiri Control, Kool Max Manual Easy Wind, ST-PQD / SD